အမေးအဖြေများ - Shandong နယူး Ankai-Kitco Co. , Ltd မှ
အဆိုပါစက်တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာစေရန်နှင့်တိကျစွာပြန်လုပ်သည်, မော်တာနှင့် synchronous လှည့်လမ်းညွှန်စွပ်အိတ်ဒီဇိုင်းကိုပိုပြီးအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များအလိုအလျှောက်တွင်ခုံ (CNC ကြိုးစားနေ) configuration ကို slitting ခိုင်မာတဲ့အပိုငျးအထောက်ပံ့နိုင်, processing ကျောမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နယူး NK CNC; စက်ကိရိယာတခု transverse ပြန်အဆုံးအာဏာကို tools များတပ်ဆင်ထားသည်။
: ထိုသို့သောစက် tools တွေကိုအောက်ပါအဓိက features တွေရှိသင့်
1. အစွမ်းထက်ဆိုင်ကလုန်းကြိတ်နိုင်စွမ်း: အအရိုးဝက်အူ, ဝက်အူ, တီကောင်, type ကိုစိတျအပိုငျးဝက်အူအဘို့ဟု High-တိကျစွာလိမ် groove လုပ်ဆောင်ပေးရန်လိုအပ်လျက်, လိမ် groove လိုအပ်ချက်ရဲ့မျက်နှာပြင်ကွမျးတမျး ra0.8mm ရောက်ရှိဖို့။
အဆိုပါ cutterhead drive ကိုမှတဆင့်လေဘွေကြိတ် tool ကို add, transverse ပြောင်းလဲနေသော tool ကိုခက်ခဲလွိုင်းရှုးမြန်နှုန်းမြင့်လည်ပတ် (အဓိက) ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပြောင်းလဲနေသောအစိတ်အပိုင်း, စက်အားဖြင့်ခပ်သိမ်းသော go စက်ကိရိယာတခုရွေ့လျားမှုနည်းလမ်းမြင့်မားတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြောင်းလဲနေသောတည်ငြိမ်မှုချည် SX325 CNC ဘို့လိုအပ်ပါတယ် tool ကိုဗိုင်းလိပ်တံ drive ကိုရှေးဟောင်းပစ္စည်းနှေးကွေးလည်ပတ် (အရန်), Z1 ရိုး workpiece အစေးနှင့်အညီသို့မဟုတ် (လှုပ်ရှားမှုဖြတ်တောက်) အ workpiece ဝင်ရိုးလှုပ်ရှားမှု (feed ကိုလှုပ်ရှားမှု), လေဘွေကြိတ် X1 သည်ရွေ့လျားမှုမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်စက်မြင့်မားသောတိကျ helical groove တလျှောက်ဦးတည်သွားစေ။
2. အမြင့်ကျောမှုကားတစ်စီးနှင့်ပေါင်းစပ်အပြောင်းအလဲနဲ့စွမ်းရည် milling:
ဇယားဆက်သွယ်ရေးအတွက် application များအတွက်တဦးတည်း, အိမ်သူအိမ်သားကရိယာ, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, ကစားစရာများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကြီးမားသောအချင်းသတ်မှတ်ချက်များ၏အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ, ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်စဉ်ကိုမြင့်မားတိကျမှန်ကန်မှု, မော်တော်ယာဉ်၏ရှုပ်ထွေးသောစက်တောင်းကြိတ်နှင့် လှည့်, SX325 CNC အားလုံးအစွမ်းထက်ကားများ, ကြိတ်, အရွယ်အစားမှ processing နိုင်ပါတယ်သွားပါ။ ရိုးရာအပြောင်းအလဲနဲ့နည်းလမ်းဒုတိယ Clamp ဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်, workpiece အစိတ်အပိုင်းများများ၏စက်တိ, ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုတွင်ခုံသို့မဟုတ်ကြိတ်စက်ကိုအသုံးတူးဖော်စက်, စက်စင်တာစက်ကိရိယာများ, အလုပ်လုပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပြောင်းအလဲနဲ့ပြီးစီးခဲ့သည်ဝယ်လိုအား၏တန်ဆာအရေအတွက်, ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်သည်ရန်ဖြစ်ပါသည် အာမခံရန်ခက်ခဲ။
ဇယားတဦးတည်း: ဆက်သွယ်ရေး, အိမ်သူအိမ်သားကရိယာ, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, ကစားစရာစက်မှုလုပ်ငန်းပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းများ (ФФ 20 အတွက် 32 မီလီမီတာအချင်း)
SX325 လှညျ့ကြိတ်, CNC အားလုံးတစ်ကြိမ် clamping နှင့်အတူမြင့်မားတဲ့ကျောမှုရှိသွားပါကကား cylindrical workpiece မြင့်မားတောင့်တင်းအောင်မြင်ရန်နိုငျသညျ, endface, ချည်, groove ဖြတ်တောက်ပယ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်အလျားလိုက်ကြိတ်, တူးဖော်ခြင်း, နှိပ်ခြင်းနှင့်အဆုံးမျက်နှာနှင့်တူးဖော်ခြင်း၏နောက်ကျောအဆုံးပြီးနောက်တွင်ခုတ်ဖြတ်, ပျင်းစရာနှင့်အခြားပေါင်းစပ်အပြောင်းအလဲနဲ့စွမ်းရည်နှိပ်။
: 3. တိကျသွယ်လျရိုးအစိတ်အပိုင်းများပါဝါထုတ်ယူခြင်း
သ။2ဟိုက်ဒရောလစ်, အလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ, လေကြောင်း, အာကာသနှင့် optical စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်မြင့်မားသောတိများနှင့်သွယ်ရိုးတံဖြစ်ပါသည်။
ပုံ 2: ဟိုက်ဒရောလစ်, အလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ, လေကြောင်း, အာကာသ, optical စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းများ (ФФ 20 အတွက် 32 မီလီမီတာအချင်း)
ဒါဟာ6ကျော်ရှည်လျား / အချင်းအချိုးနှင့်အတူသွယ်ရိုးအစိတ်အပိုင်းများကို process ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်ကို၎င်း, တိများနှင့် ထိရောက်မှုအာမခံချက်ရန်ခက်ခဲကြသည်။ နယူး NK CNC ကြောင်းအလွယ်တကူ5~ 32 မီလီမီတာကနေအချင်းလုပ်ငန်းများ၌နိုင်ပါတယ်ဒါအော်တိုခုံ slitting (CNC အားလုံးလမ်းလျှောက်) သည်ထူးခြားသောအပြောင်းအလဲနဲ့ထိုကဲ့သို့သောမြန်နှုန်းမြင့် synchronous လမ်းညွှန်ချုံအဖြစ်နည်းပညာ, workpiece အမြဲတမ်းလမ်းညွှန်စွပ်အိတ်ကထောက်ခံ tool ကိုအစိတ်အပိုင်းများဖြတ်တောက်သောကွောငျ့, 280 မီလီမီတာအစွန်းရောက်သွယ်ရိုးအစိတ်အပိုင်းများအတွင်းအရှည်။
2) အမြန်နှုန်း / အနေအထားကွင်းဆက်တုံ့ပြန်ချက်ထိုကဲ့သို့သော rotary နှင့်တုံ့ပြန်ချက်များပိုမိုမြင့်မားထိန်းချုပ်မှုတိကျသည့်ဆန်ခါသို့မဟုတ်သံလိုက် built-in high resolution ကတော့အဖြစ်အသစ်သောဒြပ်စင်များချမှတ်။
3) နှစ်ဆဗိုင်းလိပ်တံဖွဲ့စည်းပုံ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသော sequence ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့ကြောင့်အလယ်တန်းညှပ်ဖို့ workpiece ရဲ့ထိရောက်မှုနှင့်တိကျလျှော့ချ, တဦးတည်းအချိန်တွင်ပြီးစီးသဖြင့်, စက်ထိရောက်မှုတိုးတက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။
20 ကျော်အဘို့အရာခုနစ်ပါးဝင်ရိုး, ပါဝါ tool များ၏အရေအတွက်သည်နှင့်အာဏာ tools တွေနဲ့အတူတူ, ရှုပ်ထွေးအစိတ်အပိုင်းများနှင့်စက်ထိရောက်မှုထုတ်လုပ်စက်ကိရိယာတခုများ၏စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန် 4) Multi-ဝင်ရိုးထိန်းချုပ်မှုနှင့် Multi-ဝင်ရိုးချိတ်ဆက်နည်းပညာများထက်ပိုစက် tool ကိုထိန်းချုပ်ရိုးအရေအတွက်က
။ 5) ကြွယ်ဝသောအလိုအလျောက်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ, အစဉ်အလာဘားပေါ်ကိုအပြင်, ထိုကဲ့သို့သောအသိဉာဏ်ရှည်လျား / ရေတို workpiece ပစ္စည်း workpiece လက်ခံ, ဓားဆန့်ကျင်အော်တိုတူရိယာအဖြစ်၎င်းချစ်ပ်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာလူတစ်ဦးရဲ့တာစက်လည်ပတ်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ရည်မှန်းချက်နားလည်သဘောပေါက် ဖော်ထုတ်ခြင်း, tool ကိုကျိုး၏ workpiece အော်တိုပေါ့ပ်အပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်စမ်းသပ်စနစ်ထုတ်ကုန်လျှောက်လွှာအတွက်အောင်မြင်သောကွပွီဟုလစာတိုးစက် tool ကိုအလိုအလျောက်အဆင့်နှင့်စောင့်ကြည့် devices များရဲ့အဆင့်ကိုသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်။
ဖောက်သည်များအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်ပေးတာဝန်ခံအခမဲ့ 1, ။ စက် tool ကိုရွေးချယ်ခြင်းကိုနှင့် configuration အပါအဝင်အကောင်းဆုံးအပြောင်းအလဲနဲ့အစီအစဉ်, ထိရောက်အပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာ, tool ကိုရွေးချယ်ခြင်း, parameters တွေကိုဖြတ်တောက်, နာရီ, Chuck ရွေးချယ်ရေးနှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှုအလုပ်လုပ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူဖောက်သည်များကိုရန်။
2, နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဖောက်သည်များအတွက်ထောက်ခံမှုအပြည့်အဝအကွာအဝေးများကိုသုံးစက်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်ဖောက်သည်များကကြုံတွေ့ပြဿနာများကိုဖြေဆို, ခြေရာခံ၏လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး။
3, သင်တန်းပေးခြင်းများကိုဖောက်သည်အော်ပရေတာများအတွက်တာဝန်ခံ၏အခမဲ့ဖြစ်သည်။ စက် tool များ၏ကျွမ်းကျင်အသုံးပြုမှုကိုသေချာစေရန်အဖြစ်ဒီတော့သင်တန်းရဲ့ contents, စက် tool ကိုစစ်ဆင်ရေးမှာပရိုဂရမ်းမင်း, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ဤမျှအပေါ်ပါဝင်သည်။
4, အခမဲ့စက်တပ်ဆင်ပေး On-site ကို installation နဲ့စမ်းသပ်စက်များကိုဖောက်သည်များအတွက် Ankai တံခါးတပ်ဆင်ခြင်းများအတွက်ထုတ်ကုန်အသစ်လက်ခံမှုသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ, နေရာသတ်မှတ်ထားဖောက်သည်များ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသစ်အ Ankai ကော်ပိုရေးရှင်းအင်ဂျင်နီယာများအသုံးပြုပုံဖောက်သည်များအတွက်ဝ ဖောက်သည်ထုတ်ကုန်များကိုတိုက်ရိုက်သုံးနိုငျဝယ်ယူရန်နှင့်ပြည့်စုံစက်စစ်ဆေးရေးအတည်ပြုချက်ကိုဝန်ဆောင်မှုကြောင်းသေချာစေရန်စစ်ဆင်ရေး။
ပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်. 3.how?
> တိုင်းမော်ဒယ်၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်အားသာချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးဖောက်သည်များနှင့်မိတ်ဆက်စကားဘို့ခုံမော်ဒယ် options များပေးရန်။ အလွန်ကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးရှိစွာအစီအစဉ်၏ဖောက်သည်များအတွက်အများဆုံးလျောက်ပတ်မော်ဒယ်အကြံပြုပါသည်။
> ကျနော်တို့ကလိုအပ်သောင်သည့်အခါနမူနာပြီးဆုံးရန် clients များကူညီကြလိမ့်မည်ဖောက်သည်စိတ်မပူပါနဲ့-free.When လိုအပ်သောကြကုန်အံ့, ဖောက်သည်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ကြုံတွေ့ရာပြဿနာများကိုဖြေရှင်း, အများဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာဆန်းစစ်ပေးပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာများ installation နဲ့ဒီဘာဂင်န်ဆောင်မှုများအဘို့သင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာရောက်လာခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာများချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ထိထိရောက်ရောက်ရောက်ရှိပြီးနောက်အလုပ်သို့ရနိုငျအောငျ, အောက်ပါကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအတွက်အဆင်သင့်မရပါ။
1. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာများမှအာဏာကိုထောက်ပံ့ဖို့, ဆိုက်ရောက်ပြီးနောက်စက် tool ကိုမှသူတို့ကိုချိတ်ဆက်နိုင်အောင်, သုံးအဆင့် 380V power supply များနှင့်မြေပြင်ဝါယာကြိုးပြင်နှင့်တစ်ဦး 2.5mm2 ဝါယာကြိုးမှတဆင့်တပ်ဆင်ထားခံရဖို့စက်ကိရိယာတခုအနားမှာတစ်ဦးအနေအထားမှသူတို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြ စက်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
2. စက် tool ကိုပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွက်လိုအပ်သော 0.5mpa လေထုဖိအားကိုပြင်မယ့်φ8လေကြောင်းပိုက်မှတဆင့်စက်ကိရိယာတခုအနားမှာတစ်ဦးအနေအထားကချိတ်ဆက်ပါ။
3. တိအော်တိုခုံ၏စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်လုံလောက်သော (ထိုကဲ့သို့သော Ross စင်ကြယ်သောဖြတ်တောက်ခြင်းရေနံ A12 ကဲ့သို့) ရေနံဖြတ်တောက်ပြင်ဆင်ပါ။
4. (ထိုကဲ့သို့သော Ross A32 ကဲ့သို့) ချောဆီစက် tool ကိုပြင်ဆင်ပါ။